အဆိုပါအမှောင်ဘဲတိပ် Triboluminescence အတွက်တောက်
သငျသညျတခုဥပမာကြည့်ဖို့ဘဲတိပ်ကိုသုံးနိုင်သည် triboluminescence အချို့ပစ္စည်းများစက်မှုစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ပွတ်တိုက်အားအကြောင်းမဲ့ကြသောအခါအလင်းရောင်ကတော့ချွတ်ပေးသည်။ အဆိုပါဘဲတိပ် (သို့မဟုတ်ပြွန်တိပ်) triboluminescence စီမံကိန်းကိုကြိုးစားရန်စက္ကန့်အနည်းငယ်ယူအလွန်လွယ်ကူတဲ့သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်တိပ်ဘဲတိပ်သို့မဟုတ်ပြွန်တိပ်ကိုခေါ်ခြင်းရှိမရှိအရေးမပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ရလဒ်တွေကိုသင်အသုံးပြုအမှတ်တံဆိပ်အပေါ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမူတည်ဟန်: Henkel ™ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်။
တိပ်ခွေနှစ်ခု strips တွေချွတ်ခွာ။ သင် strips တွေမပါဘဲဆွဲထုတ်နိုင်အောင်အလုံအလောက်တိပ်ထွက်ခွာ, တစ်ဦးချင်းစီကတခြားရင်ဆိုင်နေရတဲ့စေးကပ်နှစ်ဖက်နှင့်အတူအပိုငျးပိုငျးကပ်ထားပါ။ မီးထွက်ပါ။ သင်၏မျက်စိအမှောင်မှထိန်းညှိဖို့တစ်မိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုပေးပါ။ ဆိတ်ကွယ်ရာတိပ်၏ strips တွေ Pull ။
သင်တိပ်ကွဲကွာရှိရာအပြာလိုင်းကြည့်ရှုခဲ့သလား ဤသူကားအ triboluminescence ထိုကဲ့သို့သောပွတ်တိုက်မှုအဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကနေစက်မှုစွမ်းအင်သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်များကဖြစ်ပေါ်ဖြာထွက်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သော။ သငျသညျအဖြစ်ကောင်းစွာတိပ်၏အခြားအမျိုးအစားများအနေဖြင့်တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိနိုင်သည်။ ကြိုးစားရန် A ကောင်းဆုံးတဦးတည်းပွင့်လင်း Scotch ™တိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးခက်အချိန်အတူတူသူတို့ရဲ့စေးကပ်နှစ်ဖက်နှင့်အတူတိပ်၏ strips တွေခွဲထုတ်ရှိပါကအလင်းကိုအတော်လေးအဖြစ်တောက်ပလိမ့်မည်မဟုတ်ပေသော်လည်း, သငျသညျ, ရိုးရှင်းစွာအလိပ်၏ချွတ် (အလျင်အမြန်) ကိုတိပ်ဆွဲအားဖြင့် triboluminescent အလင်းရောင်မြင်နိုင်ပါသည်။
အိမ်လုပ် Napalm Make လုပ်နည်း
Ketchup နှင့်မုန့်ဖုတ် Soda မီးတောင်
ကယ်လ်ဆီယမ် Chloride crystal ဟာတိုးတက်ကြီးပွားခြင်း
လက်ငင်း Slushy ဘယ်လို-ရန်
သင်အမှန်တကယ်ရေအပေါ်သင့်ကား Run နိုင်ပါသလား?
ဇီဝဗေဒ prefix နှင့်နောက်ဆက်: -otomy, -tomy
Geppi ရဲ့ဖျော်ဖြေမှုပြတိုက်, တစ်ဦးကဓာတ်ပုံလှည့်လည်
အမေရိကန်သန်းခေါင်စာရင်း Takers အဘယ်အရာကိုလုပ်ပါသလဲ?
အဆိုပါ 60, 70 နှင့် 80 ၏ဂီတအမျိုးအစား
'' အဆိုပါ Facility '' ရုပ်ရှင်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: စမ်းသပ်မှုမှား Gone
ပွငျသစျထဲတွင် "ငါအလှမယ်သင်" ဟုပြောဖို့ကိုဘယ်လို
ဆေးပြင်းလိပ်သိကောင်းစရာများ - ဆေးပြင်းလိပ်ကျွမ်းကျင်သူများအတွက်လုပ်ရန်နှင့်မလုပ်ရန်
သင်ကအစိမ်းရောင်ခြင်းအပေါ် Putter ထက်ကလပ်အခြားသုံးပါနိုင်သလား?
Excel ကို DAYS360 အမည်: နေ့စွဲများအကြားတွင်နေ့ရက်များ Count
အင်္ဂလိပ်သှနျသငျဖို့ Translate ကို Google အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
တစ်ဦးက Man တစ်ကောလိပ်အင်တာဗျူးဖို့ဘာ Wear သငျ့သလော
တရုတ်-Americans တွေနှင့် Transcontinental ရထားလမ်း
အရောင် Glass ကိုဓာတုဗေဒ
စပိန် '' ခ 'နဲ့' V ကို '' အသံထွက်
စပိန်အပိုင် adjective (Long က Form ကို)
Nanika Atta - ရိုးရှင်းသောဂျပန်စကားစုများ
အဆိုပါက Metro အတွက်တစ်ဦးကတယောပညာရှင်
ဂျိမ်းဗန် Allen ကဖြည့်ဆည်း